Root Error! — MYSTERY ZILLION
Linn Wai Yan
Pls Tell me exactly , When I root , It is take too much long time . I
wanna to rum fontchanger software for chaing myanmar font. When I run
font changer, "root is need " . pls tell me exactly "HOW TO ROOT?" . When I run z4root software ware, It is to much long time about2hour < So I stop. Pls.... TELL ME EXACTLY STEP BY STEP FOR ROOT.....Thank you all!<br>
root လုပ်နည်း အတိအကျ မမေးခင်.. ခင်များရဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား၊ မော်ဒယ်၊ OS version ဘယ်လောက်ဆိုတာ အရင်ဆုံး အတိအကျ ပြောပြဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆို Root လုပ်နည်းဆိုတာ တစ်မျိုးထဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး ။ မော်ဒယ်၊ ဗားရှင်းတွေအလို အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် ။ <br>OS ဗားရှင်းကို Settings > About PHone > software version မှာ ကြည့်လို့ရပါတယ်။ <br><font size="3">≤</font> 2.1 တွေ အများစု အတွက်တော့ z4root က အဆင်ပြေပါတယ်။ Anyway, ခင်များဖုန်းရဲ့ information လေးကို အတိအကျ ပြောပေးပါ ။ အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးပါ့မယ်ဗျာ။ <br><br>စိုင်းညီဖြိုး (<font color="#3366ff">New Anycall</font> - <font color="#3366ff">ဖုန်းနှင့် ဖုန်းအပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး</font>)<br>@ ၇၈လမ်း၊ ၂၉ x ၃၀ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။ © ၀၉ - ၂၀၂၀၈၈၉။<br><br>
Ko Sai<br>I upgrade my Huawei c8500 to v2.2.1. Now I cannot root my phone with z4root. Can you tell me which software can root v2.2.1. Thanks.<br>
Hi, Bro... Sai Nyi Phyo.... My phone is Huawei C-8500, version 2.1 .......<br>
( [email protected] ) <br>
<br>official rom က 2.2.1 မရှိပါဘူး။ 2.2 ထိပဲ ရှိတာပါ။<br>2.2.1 ဆိုရင်တော့ custom rom ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အကိုတင်လိုက်တဲ့ဗားရှင်းကသာ 2.2.1 မှန်ရင် root ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။ custom rom အကုန်လုံးနီးပါး root ပြီးသားတွေပါ။ <br>Applications တွေထဲမှာ Super User (သို့) SU ဆိုတာရှိလား ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါရှိရင်တော့ root ပြီးသားပါ ။ ဒီ့ထက်ပိုသေချာချင်ရင်တော့ Root Explorer သွင်းပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ Super user permission လာတောင်းတယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် root လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ <br>RE Download link:<a href="http://dl.ipcsuite.com/android/system/file_manager/rootexplorer_2.13.3.apk"; target="_blank" rel="nofollow"> http://dl.ipcsuite.com/android/system/file_manager/rootexplorer_2.13.3.apk</a>;
ကိုစိုင်းညီြဖိုး <br> အစ်ကို​ြေပာတဲ offeical room ကိုဘယ်မှာသွား download လုပ်ရတာလည်း။ မသိလိုမေးတာပါ ဒီဆိုက်ကိုလည်းအခုမှတွေလိုပါ ​ေနောက်ြပီး c8500,8600 ဘယ်ဖုန်းကို ပိုဝယ်သင့်လည်းဆိုတာသိချင်ပါတယ် www.mmdroid.com မှာ huawai c8500 ကိုေတာ့ <br>2.2.1 ဆိုြပီးပေထားပါတယ် huawai c8600 အတွက်ကိုတော့ froyo 2.2 ဆြိုပီးပေးထားပါတယ် ြပီးတော့ c8500,c8600 ဖုန်းတေရဲ<br>2.1 rom ကိုလည္းလိုဲချင်ပါတယ် linkလေး ​ေးြးပာပေးပါ လ်ုအကူအညီတောင်းပါတယ် အစ်ကို။ ေနာက်ြပီ android ဖုန်းတွေရဲ root လုပ်နည်းလည်းသိချင်ပါတယ် အခုလောလောဆယ်တော့် c8500,c8600 ကို root လုပ်နည်းလေးကို ြမန်မာလိုရှင်းြပပေးစေချင်ပါတယ် အခုသုံးနေတဲ့ ဖုန်းက cdma800 ဖုန်းပါ android မဟုတ်ပါဘူး သုံးချင်လို အကူညီတောင်းတာပါ အစ်ကို ကိုထိခိုက်စေတဲတောင်းဆိုချက်များပါရင် နားလည်ပေးပါ ကိုစိုင်းနားက အကူညီရတာနဲ တစ်ခါတည်း လက်တွေလုပ်မှာပါ <br> [email protected]<br>
<a href="http://www.huaweidevice.com/tcpsdownload/downLoadCenter?category=cn&amp;flay=software&amp;fileName=110425030823.zip&amp;attachmentName=C8500 V100R001C92B282..zip&quot;&gt;C8500 2.1 Official Rom (2011-04-25 Updated)</a> <br>Code name: C8500 V100R001C92B282(中国 电信) <br><br><a href="http://www.huaweidevice.com/tcpsdownload/downLoadCenter?category=cn&amp;flay=software&amp;fileName=110401043056.zip&amp;attachmentName=C8600 V100R001C92B712(Froyo Beta2.01).zip&quot;&gt;C8600 2.2 Offcial Rom (2011-04-01 updated)</a><br>Code name: C8600 V100R001C92B712(Froyo Be ta2.01)<br><i><br>ကျွန်တော့ယူဆချက်တချို့ မှားကောင်းမှားနိုင်ပါသည်။ </i><br>
ကိုစိုင်း <br> အစ်ကို ကိုအရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် root လုပ်နည်းလေးကို ြမန်မာလို ရှင်းြပပေပါ။ ဒီနေကလစာထုတ်ရက်ဆိုတော့ သွားဝယ်တော့မယ်လေ<br> အစ်ကို ရှင်းြပပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပထမတောင်းထားတဲ post ိထဲမှာ ကျန်တာလေးတွေဆက်ရှင်းြပပေးအုန်း <br> <br> <br> <br>